हनुमानढोकामा अब प्रहरी कार्यालय नरहने, पुरानो भवनमा संग्रहालय बनाउन प्रस्ताव :: शान्ति तामाङ :: Setopati
हनुमानढोकामा अब प्रहरी कार्यालय नरहने, पुरानो भवनमा संग्रहालय बनाउन प्रस्ताव
हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र।दायाँको सेतो भवन महानगरीय अपराध महाशाखा। तस्बिर : नारायण महर्जन
इन्द्रचोकबाट हनुमानढोका दरबार क्षेत्र छिर्दै हुनुहुन्छ भने आकाश भैरव मन्दिरदेखि नै काठमाडौं संस्कृति र सभ्यताको स्वाद लिन पाइन्छ।
मखन नपुगुञ्जेल थुप्रै सानाठूला गल्ली छिचोल्नुपर्छ। त्यहाँबाट अगाडि ठिङ्ग उभिएको भीमकाय तलेजु मन्दिरले मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। त्यसैको दायाँपट्टि पशुपति मन्दिर छ। भनिन्छ, काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राजाहरू सबै तीर्थस्थल दरबारक्षेत्रकै वरिपरि बनाउँथे। त्यही भएर होला, पशुपति यहीँ छ, कृष्ण मन्दिर यहीँ।
पशुपतिबाट अगाडि देब्रेतिर काल भैरवको कालजन्य रौद्र रूप देखिन्छ। त्यसैको अलिपर विशाल नगरा छ। श्वेतभैरवको भीमकाय मुहार छ। कुमारी घर छ। थुप्रै मन्दिर छन्। डबली छन्। भत्किएका काष्ठमण्डप र अरू संरचना छन्।
यी सबैका बीचमा कालभैरवको ठीक सामुन्ने सडकको दायाँतिर हनुमानढोका प्रहरी कार्यालय देख्दा भने उदेक लाग्छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध अनुसन्धान महाशाखा रहेको यो कार्यालय कामको चापका दृष्टिले प्रहरीको काठमाडौं हेडक्वार्टर नै हो।
संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रमा प्रहरीको यति ठूलो संरचना किन?
पर्यटकलाई शान्तपूर्वक घुमाउनुपर्ने ठाउँमा सवारी चाप र भिडभाड भयो भन्दै स्थानीयले यो कार्यालय सार्न माग गर्दै आएका थिए। तर, यसको सुनुवाइ भइरहेको थिएन।
भुइँचालोपछि स्थानीयको माग पूरा हुने छाँट देखिएको छ। अहिले यहाँ प्रहरी कार्यालय छैन। भुइँचालोले घरमा क्षति पुगेपछि प्रहरी कार्यालय टेकुको नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा सारिएको छ। यही मौकामा सधैंका निम्ति स्थानान्तरण गरेर प्रहरी कार्यालय रहेको भवन जिर्णोद्धार गरी संग्रहालय बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्।
‘विश्व सम्पदा सूचीकृत यो क्षेत्रमा भएका मठ-मन्दिरको आफ्नै महत्व छ। त्यही भएर हामीले सांस्कृतिक महत्वका बाहेक अन्य कार्यक्रममा समेत रोक लगाएका छौं,’ स्थानीय सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखाका कारण सवारी चाप बढेको छ। मानिसको भिड बढेको छ। त्यसैले, जनतालाई पायक पर्ने गरी अन्त कतै सारियोस् भन्ने स्थानीयको माग छ।’
भुइँचालोले सुरक्षा निकायका करिब ६ सय भवनमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये सयवटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखा भने अन्यत्रै भवन बनाएर सार्नुपर्ने स्थानीयको जोड छ।
‘हामीले यो विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा उठाएका हौं। सुनुवाइ भएको थिएन। भुइँचालोमा क्षति पुगेपछि अब यो घर मर्मतसम्भार हुन्छ। यही मौकामा प्रहरी कार्यालय सार्न पाए हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारले प्रहरीलाई सम्झाउने, बुझाउने कामको जिम्मा लिए हुन्थ्यो। बरू उनीहरुको मागअनुसार प्रविधिमैत्री भवन निर्माण गर्न महानगरले नै सहयोग गरोस्,’ उनले भने।
उनले यो ठाउँमा भुइँचालो संग्रहालय वा प्रहरीकै इतिहास झल्किने संग्रहालय बनाउन सकिने सुझाव पनि दिए।
'भुइँचालोले हनुमानढोक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो। धेरैले ज्यान गुमाए। ती सबैको सम्झनामा यहाँ भुइँचालो संग्रहालय बनाउन सकिन्छ। यो पनि पर्यटकका लागि आकर्षण हुनेछ,' श्रेष्ठले भने, 'नभए हनुमानढोका प्रहरी कार्यालयको पनि यो ठाउँमा आफ्नै इतिहास छ। प्रहरीले त्यही इतिहास समेटेर संग्रहालय बनाए पनि हुन्छ। नेवार बस्ती भएकाले घर जिर्णोद्धार गर्दा नेवारी संस्कृति समेट्न सकिन्छ।’
स्थानीयको मागमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि सहमत छ। यसबारे प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
‘हामी प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखा सार्न जग्गा खोजिरहेका छौं। तर, ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,’ प्रवक्ता कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मेयरसाबको पनि निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखिको इच्छा हो। हामी यी कार्यालय यहाँबाट छिट्टै सार्छौं।’
उनका अनुसार हाँडीगाउँमा रहेका ३५ रोपनी जग्गा हेरिएको छ। त्यहीँ बनाउने कि अर्को ठाउँ खोज्ने भन्नेमा निर्णय हुन सकेको छैन।
यति महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय सहरको भित्री क्षेत्रमा बस्दा छिटोछरितो सेवा दिन अप्ठ्यारो हुन सक्ने भएकाले यो काम गर्न लागेको उनले बताए।
‘विश्व सम्पदामा सूचीकृत सहरको भित्री क्षेत्र भएकाले सवारी प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं। पर्यटककेन्द्रित कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘छिटोछरितो सेवा दिनुपर्ने निकाय वरपर त्यस्तो भएपछि कसरी काम हुन्छ?'
त्यही भएर हनुमानढोका क्षेत्रबाट प्रहरी कार्यालय हटाएर साँस्कृतिक जीवनशैली झल्किने संग्रहालय बनाउन लागेको उनले बताए।
'प्रहरी पनि तयारै छ। उनीहरू सरकारले जहाँ भन्छ, हामी त्यहीँ जान्छौं भनिरहेका छन्,’ उनले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा मन्त्रिपरिषद्ले परिसर र महाशाखाका लागि भद्रकालीमा रहेको खाद्य संस्थानको २५ रोपनी १२ आना जग्गा किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहीँ भवन बनाउने तयारी थियो। सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई गरिएका निर्णयमा बजेट नछुट्याउने निर्णय गरे। यसले परिसर र महाशाखा सार्ने निर्णय तुहियो।
प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले भुइँचालोपछि पुरानो भवनमा बस्न उपयुक्त नभएकाले सार्ने तयारीमा पुगेको बताए।
‘हामी हनुमानढोका कार्यालय सार्न सहमत छौं, उपयुक्त स्थानको टुंगो लगाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ के बन्छ भन्ने सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ।’
महानगरले त्यहाँ संग्रहालय बनाउने कुरा गरे पनि त्यसबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
‘टेकुमा बसेर जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन गाह्रो भएको छ। प्रहरीलाई आवश्यक नयाँ संरचना बनाउन गृह मन्त्रालयलाई भनेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘प्रहरीभित्रै भने यसबारे खासै छलफल भएको छैन।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १३, २०७५, १७:४८:००